We.com.mm - လက်သည်းဖျက်ဆေးမလိုပဲ လက်သည်းနီတွေကို ဖျက်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းကောင်း (၄) ခု…
လက်သည်းဖျက်ဆေးမလိုပဲ လက်သည်းနီတွေကို ဖျက်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းကောင်း (၄) ခု…
ပျိုမေတို့အနေနဲ့ ဒီလိုအခက်ခဲမျိုးကိုတော့ ကြုံဖူးမယ်လို့ထင်ပါတယ်…။ လက်မှာဆိုးထားတဲ့ လက်သည်းနီတွေကို ဖျက်ဖို့အတွက် လက်သည်းဖျက်ဆေးကုန်နေတဲ့အခါမှာ အခက်တွေ့နေတတ်ပါတယ်…။ အခုတစ်ခါမှာတော့ အိမ်မှာလက်သည်းဖျက်ဆေးကုန်နေရင်တောင်မှ စိတ်ပူစရာမလိုတော့မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…။
၁. အရောင်ရင့်တဲ့ လက်သည်းနီ…
လက်သည်းနီကို လက်သည်းနီနဲ့ ဖျက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ထူးဆန်းသွားသလား…။ ဟုတ်ပါတယ်… သင့်လက်မှာရှိနေတဲ့ လက်သည်းနီတွေကို ဖျက်ချင်တဲ့အချိန်မှာ အရောင်ရင့်တဲ့လက်သည်းနီးကို အရင်ဆိုးလိုက်ပြီး ဂွမ်းလေးနဲ့ဖိပြီးပွတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ လက်သည်းမှာအရင်ရှိနေတဲ့ လက်သည်းနီတွေပျက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
သွားတိုက်ဆေးအနည်းငယ်ကို လက်သည်းခွံပေါ်မှာတင်ပြီး သွားတိုက်တံအဟောင်းနဲ့ ပွတ်တိုက်ပြီးဖျက်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း လက်သည်းနီတွေကို ပျက်သွားစေမှာပါ…။
၃. Hair Spray…
Hair Spray ကလည်း လက်သည်းနီတွေကို ပျက်သွားစေမယ့် ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ…။ Hair Spray ကိုလက်သည်းပေါ်မှာ ဖြန်းပေးပြီး ဂွမ်းစပေါ်မှာလည်း ဖြန်းပေးပြီး လက်သည်းကိုပွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း လက်သည်းနီတွေကို ပျက်သွားစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
ရေနွေးနွေးလေးထဲကို လက်စိမ်ထားပြီးမှ အဝတ်ခြောက်လေးနဲ့ ပွတ်ပြီးဖျက်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း လက်သည်းနီတွေကို ပျက်သွားစေပါတယ်…။ ရေနွေးနွေးလေးထဲမှာ လက်ကိုမိနစ် ၂၀ လောက်တော့ စိမ်ထားဖို့လိုမယ်နော်…။
အဆီပြန်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေတွက် ကြက်ဥအကာနဲ့ ပေါင်းတင်နည်း…
စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့အမည်းစက်တွေ ပျောက်အောင်လုပ်လို့ရမယ့်နည်း( ၄ )နည်း။
တိတ်နဲ့ အိမ်သုတ်ဆေးကိုပဲသုံးပြီး သမီးငယ်အတွက် Frozen အိပ်ခန်း ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ မိခင်
Gigi Hadid ရဲ့ Bio နဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်များ
ကိုယ့်ရဲ့အကြီးမားဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်ကြီးတစ်ခုကို ပရိသတ်တွေရှေ့မှာ ရဲရဲကြီးဝန်ခံခဲ့တဲ့ Social Influencer Dee Dee
အိပ်ခန်းနဲ့ရေချိုးခန်းတွေမှာ ဖွက်ထားတဲ့ကင်မရာတွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ